Ukuphupha iiParasites Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ngokwembono yebhayoloji, izidleleli zizilwanyana kunye nezityalo ezihlala okanye kwenye into ephilayo kwaye zifumana ukutya kuyo. Ngokuqhelekileyo, abantu abaphila ngokuxhaphaza abanye abantu okanye abaxhaphaza abanye babizwa ngokuba zii-parasites.
Ngokusisiseko, kwenziwa umahluko phakathi kwezidleleleli zangaphandle, ezihlala ngaphezulu komzimba, kunye neepoparasites, ezihlala ngaphakathi komamkeli wazo. Izidleleleli zangaphandle zibandakanya, umzekelo, iintakumba, iincukuthu, iingcongconi, iimites, amakhalane, kunye neentwala. Izidleleleli zangaphakathi zibandakanya iintshulube kunye neetsese. Ezi zihlala zifumaneka emathunjini okanye phantsi kolusu.
1 Uphawu lwephupha «iiParasites» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «iiParasites» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «iiParasites» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «iiParasites» - ukutolikwa ngokubanzi
Kwinqanaba eliqhelekileyo lohlalutyo lwamaphupha, uphawu "lwee-parasites" luqondwa njengophawu kulowo uphuphayo ukuba uyabazi abanye abantu ekuvukeni kobomi. amandla ibiwe. Banokucinga ukuba indlela umntu aphila ngayo inomdla kwaye yahlukile kubomi babo. Kungenxa yoko le nto befuna ukuthatha inxaxheba ngenkohlakalo kubomi bamaphupha.
Ukuba ubona iintakumba ephupheni lakho, kusenokwenzeka ukuba unengxaki kuzo el mundo ukuvuka okanye akunjalo ingxaki ngaphambili, awunakho okanye awunakuze ungayihoyi Iintwala njengezidleleli ephupheni zibonakalisa iingcinga kunye neemvakalelo ezizithuthumbisayo. Ekuhambeni kwexesha, ezi zinokujongela phantsi ukuzithemba kunye namandla.
Ukuba ubona intwala okanye intakumba kwisilwanyana, njengenja, ephupheni, ngokokuphononongwa ngokubanzi kwephupha, kuyacaphukisa, ngakumbi kubomi bokuvuka. inkingaoko kutsala umdla nokuba akubalulekanga.
Amakhalane esikhumbeni sakho njengophawu lwephupha uhlala elumkisa ngobunzima bosapho. Umzekelo, umbungu ofana neentshulube zentshulube, ufuzisela ukuba abanye abantu abakhohlisayo nabakhohlisayo bathabathe iphupha ngendlela encinci.
Ukuba awukwazi ukulahla okanye uphelise isilwanyana xa ulele, ngokuqinisekileyo uya kwinto ethile. Umanyenelonto yenza ubomi bube nzima. Ingayingxaki okanye ingxaki ethile, kunye nomntu.
Uphawu lwephupha «iiParasites» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwengqondo yephupha kutolika umfanekiso wephupha "njengee-parasites" ngengqondo yokuba iphupha elo lingabonakala lingahlambulukanga kwihlabathi elivukayo. Ngokoluvo lwakhe, ukwimeko yoku Ukungahlambuluki kwengqondo. Izizathu zoku isenokuba kukuziva unetyala okanye uneentloni ngesenzo esithile.
Ii-Parasites njengophawu lwephupha zinokukwenza kucace ukuba umntu unokufumana ngaphandle koncedo kwaye inkxaso abanye abanako ukusombulula iingxaki ezithile. Ukuba umntu oleleyo uneentwala entloko, oku kunokuqondwa njengophawu lokuzithemba oluphantsi okanye olungaphuhliswanga. Kungacetyiswa ukuba iqela elinomdla lisebenze kuye.
Umbungu phantsi kolusu njenge-parasite ephupheni ifuzisela umntu onomdla ukuba yena ukungalingani kwengqondo yi. Unokuziva unetyala malunga nento eyadlulayo engekasetyenzwa.
Uphawu lwephupha «iiParasites» - ukutolika kokomoya
Ngokwenkcazo yephupha lokomoya, uphawu lwephupha "iiParasites" lilumkisa umntu oleleyo, hayi ummelwane wakhe ".munca«. Kuya kufuneka ulumke ungabaphathi gadalala ngamandla, ngokweemvakalelo, okanye ngokomoya.